▷ Laptọọpụ 2-in-1 kacha mma nke 2022: echiche, na-enye ...
Laptọọpụ ndị a na-agbanwe agbanwe (ma ọ bụ laptọọpụ 2-in-1 dị ka ụfọdụ na-akpọ ha) abụchaghị ụdị kọmpụta ọhụrụ. Ejirila kọmpụta mbadamba ihe na gburugburu ebe ọrụ kemgbe 1990, mana ha aghọwo ihe na-ewu ewu karịa n'etiti ndị ọrụ ụbọchị na-adịbeghị anya. Nke ọnụahịa si ada ọ bụla otu n'ime ihe mere ha ji bata n'ahịa a.
Na ntule a Anyị ga-ahụ uru kacha mma maka ego kọmpụta ndị nwere ike ịgbanwe agbanwe. Mana ka anyị buru ụzọ hụ ihe anyị ga-atụ anya na ngwaọrụ ụdị a. Nke mbụ na-ekwu na ultrabooks nwere ike ịgbanwe kwesịrị ịdị ọkụ ma dị gịrịgịrị, nke abụọ, ha kwesịrị inwe ihuenyo mbughari. Nke a bụ ihe na-eme ka ha bụrụ laptọọpụ nkịtị, ebe ọ bụ na anyị na-enye ohere iji ha dị ka mbadamba nkume, dị larịị na tebụl ma ọ bụ jide ya na uwe aka. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, gbanwee laptọọpụ anyị maara n'oge gara aga ka ọ bụrụ ngwaọrụ na-agbanwe agbanwe.
1 2-in-1 atụnyere laptọọpụ kọnvatịbụl
2 Uru kacha mma maka laptọọpụ mgbanwe ego
3 Ụdị kacha mma na laptọọpụ 2-in-1
4 Laptọọpụ mgbanwe 2-na-1 dị ọnụ ala maka ojiji kwa ụbọchị
4.2 Asus ZenBook tụgharịa
4.4 Lenovo Yoga 520 (Flex 14 na 15)
5 Laptop 2-na-1 kacha mma
5.2 Na Pro 7
5.4 Lenovo Yoga ebughibu 9
6 Kedu ihe bụ laptọọpụ na-agbanwe agbanwe?
7 Otu esi ahọrọ laptọọpụ na-agbanwe agbanwe: ihe ị kwesịrị iburu n'uche
7.2 Ibu ibu
8 Ebe ịzụta kacha mma kọnvatịbụl laptọọpụ
9 Laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba ihe na-agbanwe agbanwe?
9.1 Ihe ndị a ga-atụle na laptọọpụ mgbanwe
9.2 A ga-enyocha ya na mbadamba nkume
10 Uru nke ịzụrụ laptọọpụ 2-in-1 na-agbanwe agbanwe
10.1 Dị ike na ịrụ ọrụ nke ọma
10.3 Ọdịdị mara mma karịa
10.4 Ìhè na-eguzogide ọgwụ
10.5 Sistemu arụ ọrụ zuru oke
11 Nchikota, echiche na ntule
2-in-1 atụnyere laptọọpụ kọnvatịbụl
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe kacha mma kọnvatịbụl laptọọpụ, n'okpuru ị nwere a ntụnyere table nke ga-enyere gị aka ịhọrọ ihe nlereanya nke kasị mma suut gị mkpa na mmefu ego.
Laptọọpụ na-agbanwe agbanwe na-abịa n'ọtụtụ ụdị na ihe dị ugbu a, yana a dịgasị iche iche nke atụmatụ na ọnụ ahịa. Ọzọkwa, anyị ga-ekewa akụkọ ahụ ụzọ abụọ. Ya mere, ị ga-ahụ akụkụ nke ga-enyere gị aka ịhọrọ kacha mma 2 na 1 laptọọpụ na nke ọzọ anyị ga-ekpughere kọmpụta ndị na-agbanwe agbanwe dị ọnụ ala na àgwà nke ị nwere ike ịchọta.
N'ikpeazụ nke akụkọ a, ị ga-enwe echiche doro anya nke laptọọpụ 2-in-1 masịrị gị dabere na njirimara ị na-achọ na mmefu ego gị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ahụ na ị na-ejighị n'aka, enwela obi nkoropụ, n'ihi na ị nwere ike na-ahapụ a ikwu na anyị ga-enyere gị aka dozie gị obi abụọ.
Uru kacha mma maka laptọọpụ mgbanwe ego
Ọ bụrụ na anyị ga-etinye "ma" na 2 na 1 akụrụngwa, ọ ga-emetụta ọnụahịa ahụ. Ma emehiela: ọ bụghị na ha abaghị uru, ọ bụ na ihe anyị ga-azụta bụ kọmputa abụọ n'otu ngwaọrụ. N'ịbụ ndị a hụrụ dị ka nke a, anyị nwere ike ịsị na ọnụahịa dị ala karịa ma ọ bụrụ na anyị zụtara ha iche iche, ma dị oke ọnụ ma ọ bụrụ na anyị nwere mmasị na otu n'ime ha abụọ. Ya mere, ọ bara uru ịchọ otu ndị nwere ezigbo mma /ọnụahịa.
Laptọọpụ kacha mma na-agbanwe agbanwe na-atụle ihe ọ na-enye anyị na ọnụahịa ya adịghị oke elu bụ Lenovo Yoga 920. Ọ bụ kọmpụta nwere ihuenyo 13,9 ”UHD nwere mkpebi 3840 × 2160, nke bụ ihuenyo dị mma nke ga-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ụdị ọdịnaya niile.
N'ihe gbasara akụrụngwa na arụmọrụ ya, o nwere a i7 processor quad-core nwere ọsọ elekere nke dị n'etiti 1.6GHz na 3.4GHz. Na ya anyị nwere ike ime ihe ọ bụla, ma nke a na ụdị processor e mere na-adị kwa ụbọchị iji n'uche, n'ihi na ọrụ ndị na-adịghị mkpa ịrụ nnọọ achọ ọrụ.
Maka ebe nchekwa, Lenovo na-enye 512GB na SSD, nke ga-eme ka ịnweta na imeghe faịlụ anyị bụrụ ihe na-egbuke egbuke nke anya. 8GB nke RAM ya na-emesi anyị obi ike na anyị nwere ike ịrụ ọtụtụ ọrụ n'otu oge, ma ọ bụghị ma ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ha bụ ọrụ dị arọ dị ka nhazi mgbasa ozi.
Sistemụ arụmọrụ gụnyere na Yoga 920 bụ a Windows 10 nke na-enye anyị ụdị ohere ọ bụla, ma na desktọpụ ma maka mgbe anyị na-eji kọmputa dịka mbadamba.
Ụdị kacha mma na laptọọpụ 2-in-1
Ọ bụ ezie na ha nọ n'ahịa ruo ọtụtụ afọ, ọ bụghị ụdị niile na-enye ụdị ngwaahịa a ịzụta. Nke a bụ ndepụta nke ụdị kachasị mma na laptọọpụ ndị na-agbanwe agbanwe:
Na-enye akwụkwọ ndetu dị iche iche 2 na 1 na maka akpa niile, ya mere, ọ ga-esiri gị ike ịchọta ihe nlereanya ị na-achọ na ika a.
Ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ na-enye ugbu a ụdị kọmpụta ndị nwere ike ịgbanwe agbanwe. Lenovo na-amasị anyị n'ihi na ọ nwere ụdị ọhụụ na nke arụpụtara nke ọma, yabụ na ọ bụ nzọ dị mma n'enweghị obi abụọ ọ bụla. Ihe kachasị mma banyere Lenovo bụ na o nwere akụrụngwa maka ụdị onye ọrụ ọ bụla, n'ime nke anyị nwere onye ọrụ / ụlọ, ọkachamara ma ọ bụ ọbụna ọkwa egwuregwu.
N'ime usoro ya, Yoga pụtara. Aha ya sitere n'ike mmụọ nsọ n'ihi na ọ bụ maka akụrụngwa nke ihuenyo nwere ike itinye n'ọnọdụ ọ bụla, mana nke a abụghị naanị ọrụ na-atọ ụtọ nke Yoga. Anyị nwekwara Laptọọpụ Lenovo na teknụzụ kachasị ọhụrụ, n'ime nke anyị nwere ndị nrụpụta ọgbara ọhụrụ na ihuenyo mmetụ, yana atụmatụ kachasị mma.
Ndị otu ha na-elekwasị anya na njedebe dị ala, ya mere ọ bụ nhọrọ dị mma ma ọ bụrụ na mmefu ego anyị siri ike. Ebe ị nwere ike ịhụ ihe ọzọ Laptọọpụ Mediion.
Afọ ole na ole gara aga, ha nyere ọtụtụ ụdị ịhọrọ site na mana oke ZenBook ka ọ nwere nhọrọ na-adọrọ mmasị nke ukwuu Ihe ị ga-eburu n'uche ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta laptọọpụ na-agbanwe agbanwe dị ọnụ ala.
Ọ bụ nhọrọ dị elu nke ị kwesịrị ịtụle ma ọ bụrụ na ị nwere mmefu ego dị mma. Ogo nke ihuenyo ya dị oke mma yana enwere ọtụtụ nhazi ngwaike maka anyị ịhọrọ ihe kacha mma maka mkpa anyị. Obi abụọ adịghị ya, na Ibu Microsoft ị gaghị enwe mmechuihu.
Laptọọpụ mgbanwe 2-na-1 dị ọnụ ala maka ojiji kwa ụbọchị
Na ngalaba mbụ a, ị ga-ahụ kọmpụta ngwakọ nke dabara gị mma na-eburu n'uche ọnụahịa. Na ngalaba nke abụọ anyị ga-ekwu maka ihe kacha mma na ahịa mana ndị ahụ ga-adịrịrị ọnụ.
E wepụtara ihe nlereanya Yoga na 2013 na Lenovo ewepụtala ndị ga-anọchi anya ole na ole kemgbe ahụ. Yoga 2 bụ ụdị edozibere nke Haswell nke hụrụ ìhè nke ụbọchị na 2014 ka Yoga 3, ahịrị siri ike sitere na Broadwell, malitere na mbido 2015 ma yabụ, kwa afọ a na-emeghachi ha ma na-akpụzi ka ọ bụrụ ngwaahịa na-abawanye ụba. gburugburu.
Yoga C630 nwere laptọọpụ na-agbanwe agbanwe nke 14 sentimita. Anyị nwere ihuenyo IPS zuru ezu na Lenovo na-ekwu na ọ tinyela sentimita 14 n'ime anụ ahụ nke anụ ọhịa 13. Nke bụ eziokwu bụ na ụdị kachasị ọhụrụ enwetala milimita ole na ole ebe a na ebe ahụ yana ntakịrị ibu.
Mgbanwe ndị ọzọ buru ibu dị n'ime kwa, dịka Yoga 7 nwere ngwa ngwa Intel Core i5 na i7 processor gbakwunyere eserese raara onwe ya nye na ụdị n'elu. Ya mere, anyị nwere ike ikwu na eserese na-egosipụta. Ewezuga nke a, ọ bụghị ihe karịrị akụkụ nke njikọta agbanweela, nke na-enye ọtụtụ nhọrọ njikọ n'akụkụ.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ịsị na Yoga 7 dị ntakịrị ọnụ ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na nwanne ya na-agbanwe agbanwe na laptọọpụ, ebe ọ bụ ihe ruru 1200 euro mana anyị ga-eburu n'uche na ọ na-abịa nke ọma na emelitere na nso nso a, na. nke anyị ga-eburu ngwaike kachasị ọhụrụ n'ụlọ.
Asus ZenBook tụgharịa
ASUS ZenBook tụgharịa 13 ...
Enwere ọtụtụ ụdị n'ime usoro akwụkwọ ndetu nke inch 13 na 15, mana Abụọ ndị a kacha dọta uche m.
N'ịbụ onye nwere ọgbọ ọhụrụ nke Intel processors, ngwaike nke akwụkwọ ndetu a na-abịa yana 16 GB nke RAM yana nchekwa ime 2TB nke anyị nwere ike itinye 256GB ma ọ bụ 512GB SDD ka ịhọrọ. Ihuenyo nwere bụ eme ihe 13,3-inch nwere FHD ma ọ bụ 2K na IPS na-agbanwe agbanwe (doro anya) yana 52 Wh nke ike batrị.
Tinyere kọmpụta ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe na ndepụta ahụ, Asus ZenBook Flip bụ kọmpat ma ụfọdụ na-ewere ya dị ka otu n'ime laptọọpụ ndị na-agbanwe agbanwe na ahịa (ihe dịka 1,1kg), mana nke ahụ bụ isi n'ihi ya. Ahụ dị ka MacBook. Ọ bụ ezie na ngwaọrụ ndị dị ka Dell Inspiron 13 7000 ma ọ bụ Lenovo Yoga 3 nke anyị kwuburu banyere ya nwere shells plastik. Ị ga-ahụ ihe dị iche na aluminom ahụ kpuchie nke mbadamba nkume a.
E wezụga nke a ọnụ ahịa na-adịkarị 50-100 euro dị ọnụ ala karịa kọmpụta ndị nwere ike ịgbanwe agbanwe nwere njirimara ndị yiri ya sitere na Dell, HP ma ọ bụ Lenovo n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịdịgasị iche site na obodo na ụlọ ahịa. Anyị na-akwado nke ahụ jiri onyinye ndị anyị na-etinye Na Laptọọpụ-Baratos.net iji kwụọ ntakịrị obere.
N'ozuzu, ọ bụ nnukwu laptọọpụ na-agbanwe agbanwe mana ọ dị ọnụ ala na ụfọdụ nhazi na-enwe ike ịhapụ ya na mmasị gị. Ọ na-edobe ihuenyo mmetụ ahụ, ọdịdị ahụ, ahụ ọla na keyboard NumPad yana mgbakwunye njikọ na nhọrọ maka Intel Iris Plus na eserese, mana na-ekwukwa na batrị ahụ nwere obere ikike (67 Wh).
Ụdị kọmpụta ndị a na-agbanwe agbanwe yiri kọmpụta mbadamba ihe Windows nke ị nwere ike iji dị ka ngwaọrụ "kwụ ọtọ", ma ọ bụ jikọọ ha na a multifunctional ọdụ. Ha wetara ha keyboard, trackpad (igbe ahụ na-agagharị dị ka òké) na n'ọnọdụ ụfọdụ njirimara ndị ọzọ dị ka ọdụ ụgbọ mmiri njikọ na batrị ndị ọzọ. Obi abụọ adịghị ya na-akpali ngwakọ laptọọpụ nlereanya.
HP x360 bụ ụdị kachasị akụ na ụba nke ụdị ya, na-ebu ngwaike 5Ghz Intel Core i4,2. Laptọọpụ na-agbanwe agbanwe nke ndị a nwere onye ofufe mana ọ dị jụụ (nke ahụ pụtara enweghị mkpọtụ), nnwere onwe zuru oke maka mmemme ojiji kwa ụbọchị yana ihe dị ka awa 6 nke ndụ batrị. Na-enye 14-inch LED-backlit ngosi nwere a Mkpebi 1920X1080 pikselụ ihuenyo.
x360 bụ Mkpa ọkụ na mkpa gbakwunyere na-enwe mmetụta dị oke okomoko ma e jiri ya tụnyere kọmpụta ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe nke otu ọnụ ahịa. N'ezie, a na-achụ ntakịrị ọrụ, nke na nke a bụ naanị keyboard Bluetooth. Maka akụkụ nke ya, X360 na-ejikọta ya na mbadamba ụrọ na gụnyere ọdụ ụgbọ mmiri na ohere maka draịvụ ike nha 2,5 ″ (ọkọlọtọ) n'ime.
Ọ nwere ọnụ ahịa nke ihe dị ka euro 350 n'ime ihe nlereanya ya kachasị mkpa, mana ị nwere ike ịchọta ha ọbụlagodi obere oge ụfọdụ (ọ bụrụ n'ịdenye aha na akwụkwọ akụkọ anyị, anyị ga-agwa gị onyinye ndị a). HP x360 dị na ị nwere ike nweta ya na ire ere.
Lenovo Yoga 520 (Flex 14 na 15)
Nke a bụ ahịrị Lenovo nke laptọọpụ kọnvatịbụl dị ọnụ ala. Dị ka ị na-ahụ, ọ dị ka onye nrụpụta a na-ewere achicha ahụ maka ihe ọ na-eme na mpaghara a. Flex 5 dị na 14 na 15,6 sentimita asatọ, malite na ọnụ ahịa ihe dị ka euro 800 na ọbụna nwere ike iru obere ọ bụrụ na ị gaa na onyinye anyị na-ejikọta gị.
Ị nwere nkọwa teknụzụ dị mma, ọtụtụ njikọta na ihuenyo na-agbagharị n'azụ, dị ka Yoga mana gburugburu ogo 270. Nke a pụtara na n'adịghị ka Transformers anyị kwuburu banyere ya, Flex enweghị ike iji ya dị ka mbadamba mbadamba, naanị dị ka laptọọpụ ụdị ngosi.
Yoga 920 nwere ndụ batrị nke awa 8 ma tụọ ihe dịka 1,7kg. Nke a pụtara na batrị ya ga-adịru ogologo oge n'iji ya eme ihe kwa ụbọchị yana nhazi nhazi Core i57. nwere ihuenyo mmetụ 14-inch na 4K mkpebi, nke na-etinye ya na ọkwa dị elu ma e jiri ya tụnyere Asus akara na IPS.
N'aka nke ọzọ ọ na-esi na 150 ruo 200 euro dị ọnụ ala karịa kọmpụta ngwakọ yiri nke ahụ sitere na ahịrị Akwụkwọ Transformer nke anyị kwurula na mbụ.
N'agbanyeghị ihe ndị a niile, Yoga kọnvatịbụl kọmputa bụ dị ọnụ ala tụnyere ndị ọzọ. Ụdị 14 na 15 erughị 1000 euro. E gosipụtara ụdị Flex 3 11 (nke a maara dị ka Yoga 300) nke nwekwara ike ịtụgharị ka ọ bụrụ mbadamba ihe na ọnụ ahịa ya. erughị euro 400, ma nkọwa teknụzụ adịghị mma (n'ụzọ ezi uche dị na ya) ebe ọ na-aga na ngwaike Celeron na ihuenyo 1366 x 768. Chee echiche, ọ bụ onye asọmpi dị mma maka Dell Inspiron 11 3000 na HP Pavilion 11 X360.
Laptop 2-na-1 kacha mma
Ọ bụrụ na ịchọrọ laptọọpụ ngwakọ kacha mma na ahịa, ị ga-ahụ ya na ngalaba a. N'ezie, na nke a, atụla anya na ọ ga-adị ọnụ ala ma ọlị.
Ọ bụrụ na ị dị njikere imefu ihe na-erughị euro 800 na laptọọpụ na-agbanwe agbanwe na mbadamba, Paviliion HP kwesịrị ịnọ n'elu ndepụta gị. Anyị na-agwa gị ihe kpatara ya.
HP ejirila igwe a rụọ ezigbo ọrụ. Ha nwere ejiri ígwè rụọ ma ọ bụghị plastik, eziokwu na-eme siri ike ma mara mma, na mgbakwunye na inwe a ahụigodo ọkụ dị n'okpuru nwere ngosi mara mma.
Ị nwere ike ịhọrọ site na nhọrọ ole na ole, na ọbụna ụdị isi nwere a Mkpebi HD zuru oke (4K) na IPS panel, nke dị mma. Ọ na-agụnye digitizer na onye na-eji mkpịsị akwụkwọ na-arụ ọrụ, ya mere HP Specter dị mma maka ịse ma ọ bụ ịse. Site n'ụzọ, buru n'uche na a naghị etinye pensụl mgbe ịzụrụ ya mana ọ ka bara uru.
Ejikọtara ihe ngosi ahụ na ngwa ngwa Broadwell ma ọ bụ ngwa Skylake nke nhọrọ gị yana ya ruo 16 GB nke RAM con Ebe nchekwa SSD. Ihe ndị na-eme Specter jiri uwe kwa ụbọchị na-efe efe nke ọma uwa ruo awa 8 batrị n'otu chaja, ihe ị na-enweghị ike ịhụ na laptọọpụ 2-in-1 ọ bụla.
N'aka nke ọzọ, ezigbo ihe owuwu aluminom na-emetụta n'ụzọ doro anya ịdị arọ ya, nke ọbụna na ọ dị ka ọ bụghị n'ihi na adịghị eru 2 n'arọ. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ ìhè, ị ga-ahụ laptọọpụ ọzọ na-agbanwe n'ime mbadamba nkume dị arọ na-enweghị nnukwu mgbalị (lee ndị gara aga dịka ọmụmaatụ).
Maka ụfọdụ akpa ihe nlereanya a ga-adọta ntakịrị azụ, ma ọ bụ ezie na a zụrụ ya ị ga-amarakwa na itinye ego ahụ ga-aba uru.
The Surface Pro (7, Go na ndị ọhụrụ) bụ laptọọpụ mbadamba ụrọ dị iche iche ebe ọ bụ mbadamba Windows nke enwere ike ijikọ ya na mkpuchi keyboard maka ahụmịhe dịka mbadamba. Nke a na-eme ọzọ kọmpat na Mkpa ọkụ karịa ụdị laptọọpụ ọ bụla 2-in-1. Anyị na-akwado ya ka ọ nyekwuo desktọpụ, tebụl, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndụ elu ọ bụla ọzọ dị larịị ọ bụghị nke ukwuu maka njem ma ọ bụ n'apata gị.
Surface Pro nwere ụfọdụ okomoko atụmatụ dị ka ihuenyo nke 3: 2 mkpebi dị elu nwere obere bezels na akara nkwado mmebe (gụnyere N-Trig na pensụl). Ị nwekwara ike idozi shelf nke dị iche iche akụkụ si n'azụ na a nnọọ inogide ahu, yana a nnọọ jụụ jụrụ usoro ọbụna iji fan.
Ewezuga ihe ndị a niile, Surface Pro na-abịa na ngwaike Intel core i5 ma ọ bụ i7, mana yana mmelite maka ihe na-eme Surface Pro 7 pụta na njedebe nke afọ gara aga. Nhọrọ nke ị nwere ike ịtụle na-adọrọ mmasị na onyinye a anyị na-ejikọta gị.
Na njedebe ya niile, ebe Surface Pro bụ otu n'ime laptọọpụ ndị na-agbanwe agbanwe dabere na Microsoft na ndị kacha mma gosiri àgwà ndị a ruo taaỌ bụghị ihe na-anọchi anya laptọọpụ ka ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ikwere na ọ bụ ya. Ọ na-emezu ọrụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, anyị anaghị akwado ya ka ọ jiri ụkwụ ma ọ bụ dina n'àkwà, ebe ọ bụ na nke a ị nwere ike ime ya na nke ọ bụla. ọnụ ala laptọọpụ Kedu nke na-eme. Ọ nweghị ahụmịhe ahụigodo ka mma yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị ọkụ mana ọ dịgidere, ị nwere ike ịmasị ile anya. ultrabooks dị ọnụ ala.
Nke a apụtaghị na Surface Pro enweghị ike ịbụ nhọrọ kacha mma maka gị, ọkachasị ọ bụrụ na ịchọrọ ka laptọọpụ 2-in-1 na-eji dị ka mbadamba ihe ọtụtụ oge na ọ bụghị isi dị ka a netbook. Mana dịka ị hụlarị, ị gaghị ahụ ya ọnụ ala. Nhazi nke isi na Intel Core M processor na-abịa na 4 GB nke RAM na 128 GB nke ebe nchekwa, ọ na-amalite na ọnụahịa nke ihe dịka 700 euro na ndị kwalitere nwere ike ịgafe 1000 euro n'enweghị nsogbu. Naanị cheta na etinyeghị mkpuchi ahụigodo na ọ nwere ike na-eri gị ihe ruru 100 euro.
Anyị na-ekwu maka Lenovo ọzọ na ọ bụ nke na-aga n'ihu na laptọọpụ ndị na-agbanwe agbanwe nke anyị hụrụ n'ahịa. Ya na ụfọdụ elu ụkpụrụ N'ahịrị ThinkPad, ThinkPad Yoga na-apụta, ugbu a karịa ngwakọ karịa mgbe ọ bụla. Enwere ụdị atọ dị iche iche na ụlọ ahịa N'oge mmepe nke ntụnyere a, 12,5-inch, 14 na 15,6-inch.
Lenovo Yoga ebughibu 9
Banyere ụdị ihe karịrị inch 14, ọgbọ kachasị ọhụrụ na-abịa na nrụpụta ngwaike ejiri aka nke ọgbọ nke 11 nke Intel, ma i5 na i7 maka ndị na-achọ ike kachasị. Ma ọ bụ anyị enweghị ike ichefu ihuenyo IPS ya na mkpebi 4K, otu n'ime ihe kacha mma anyị hụrụ na ibe a.
Ewezuga nke a, ị nwere ezigbo nhọrọ nke ọdụ ụgbọ mmiri njikọ dị, ahụigodo ergonomic dị mma yana ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ tụnyere ihe ọ bụla Yoga Pro. The bọtịnụ na-mechanly ekpochi mgbe ngwaọrụ hapụrụ "obere mode" otú ha na-adịghị ka ekpughere tụnyere Yoga. Yoga Slim dị ike karịa, mere maka dịrị ndụ na ụlọ ọrụ na ntọala ụlọ ọrụ, nke mere ndị ọchụnta ego ji enyocha laptops ndị a na-agbanwe agbanwe.
Chefuo maka iburu chaja n'ihi na nkezi ndụ batrị dị ihe dị ka awa iri na ise n'otu chajị. Karịa nke zuru oke maka ụbọchị dum.
Ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike iche na Yoga Slim 9 nwere ike ịdị ntakịrị ma dị arọ mana ọ nweghị ihe ọzọ dị na eziokwu, ebe ọ bụ naanị 1,56 n'arọ.
Maka ihe Lenovo Yoga Slim 9 na-efu, ọ na-amalite na gburugburu 900 euro, anyị na-enweta ụdị nwere Intel Core i7 11th gen processor, yana 16 GB nke RAM na 1T nke SSD ebe nchekwa (ngwa ngwa). Enwere ụdị dị ọnụ ala karịa (ndị ọgbọ ochie mana ha adịkwaghị na ngwaahịa).
N'ime laptọọpụ niile na-agbanwe agbanwe, anyị nwere ike ịsị na Chuwi Hi10 bụ otu n'ime ndị na-adịghị ahụkebe… Ọ na-enye ihuenyo mmetụ inch 10,1 nke ahụ. na-ewepụ, Gịnị na-eme ka ọ a imewe na anaghị ekpughe ahụigodo gị na ọnọdụ mbadamba, mana kedu ihe ndị ọrụ na-achọ laptọọpụ 2-in-1 na ntụnyere a dị ka.
Ozugbo i mebiela imewe na ịma mma nke mbadamba ụrọ a, ị ga-ahụ nke ahụ Chuwi Hi10 bara uru na nyocha a. Ọ dị ihe na-erughị 600g ma nwee ọmarịcha ihuenyo yana stylus gụnyere. Dị ka ngwaike anyị enweelarị Intel Celeron nwere ihe ruru 6 GB nke RAM yana ọtụtụ SSD ịhọrọ. Ahụigodo ahụ na-efu ahịrị bọtịnụ ọrụ nke ụdị ndị gara aga nwere, yabụ ị ga-achọ oge iji mara ya ahụ.
N'ikpeazụ, ọnụahịa nke mgbanwe a dị ọnụ ala, isi ihe na-efu ihe dị ka euro 270 ma tinye Celeron N4120 dị ka onye nrụpụta yana 6GB nke RAM na 128GB nke SSD draịvụ ike, n'agbanyeghị na obere ihe anyị nwere ụdị nke dị ike karị. Agbanyeghị, echegbula, site na mgbe ị gụrụ nke a, ọnụ ahịa ahụ ga-adabarịrị, yabụ ana m akwado ka ị jiri njikọ ndị anyị tinyegoro na ntụnyere a ka ịga na onyinye dị ọnụ ala.
Ịga na ThinkPad Yoga 14s ọ ka mma karịa. Ewubere ya n'otu ụdị, mana enweghị mkpịsị odee ma ọ bụ mgbasa ozi digitizable, dochie anya eserese raara onwe ya nye. Ụdị laptọọpụ a na-agbanwe agbanwe na-abịa na ihuenyo mmetụ IPS 14-inch, ruo 16GB nke RAM, yana ụdị ebe nchekwa dị iche iche nke nwere eserese Intel Iris Xe, ha niile dị n'ime ahụ dị ihe dị ka 1,43kg.
Akụkụ ndị a na-egosi na ThinkPad Yoga bụ onye asọmpi ahụ nwere ike na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, multimedia ọdịnaya na ụfọdụ egwu egwuregwu. Ọ bụghị obere ibugharị dịka ọmụmaatụ Zenbook anyị kwuru maka ya na ihe ultrabooks Ọ bụ ezie na ha na-ekerịta ụdị njirimara, mana hey, ọ bụ laptọọpụ 2-in-1 na ọ bụ ngwakọ na ntụgharị. Ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ya. Na mgbakwunye na ịbụ dị ọnụ ala karịa na ngwa ngwa ebe ọ bụ na ụdị ya bụ isi nwere ọnụahịa sitere na 1000 euro.
N'ikpeazụ ị nwekwara ụdị ThinkPad Yoga 15 nke sitere na ya nha nke laptọọpụ zuru oke nwere ihuenyo 15,6 inch. N'ezie Ọ bụ otu n'ime obere kọmpụta ndị nwere ike ịgbanwe agbanwe nke nha a, yabụ anyị na-akwado ya dị ka nke mbụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe nwere ihuenyo 15-inch. Ewuru na Broadwell ma tụọ ihe dị ka 2,5kg àjà 16GB nke RAM, eserese raara onwe ya nye na ahụigodo NumPad na nhọrọ nchekwa dị iche iche. Ihe nlereanya a na-amalite na ọnụ ahịa ihe dị ka euro 950 na nhazi ya kachasị.
Kedu ihe bụ laptọọpụ na-agbanwe agbanwe?
Laptọọpụ na-agbanwe agbanwe bụ ụdị laptọọpụ pụrụ iche. Ị nwere ike iwepụ ahụigodo, nke mere na ọ ga-aghọ mbadamba nkume. A na-akpọkwa ha dị ka laptọọpụ 2-in-1 ma ọ bụ nanị 2-in-1 convertibles. Ọ bụrụ na ị hụtụla aha ọ bụla n'ime aha ndị a, mara na ha bụ otu, ma ọ bụ rụtụ aka n'otu ngwaahịa ahụ.
Nwee ike ịrụ ọrụ dị ka mbadamba na laptọọpụ, A na-agbasawanye ohere maka onye ọrụ. Ị nwere ike iji ya dị ka ihe nkịtị dị ka ngwaọrụ abụọ ahụ. Ọ bụ nhọrọ dị mma n'echiche a, n'ihi na enwere ike inye ya ụdị ojiji ọ bụla. Site na ịrụ ọrụ ruo iri ọdịnaya, mgbe ị na-ewepụ ahụigodo. Onye ọrụ ọ bụla nwere ike iji ya mee ihe.
Ihe nkịtị bụ na laptọọpụ na-agbanwe agbanwe na-abịa na Windows 10 dị ka sistemụ arụmọrụ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ahịa, ebe ọ bụ na akwụkwọ ndetu dị ugbu a na-eji sistemụ arụmọrụ Microsoft eme ihe mgbe niile. Ya mere, mbadamba nkume ị na-eji ga-enwekwa sistemụ arụmọrụ a.
Otu esi ahọrọ laptọọpụ na-agbanwe agbanwe: ihe ị kwesịrị iburu n'uche
Ọ bụrụ na n'oge a ị ka nwere obi abụọ banyere Kedu laptọọpụ kọnvatịbụl ịzụta, N'okpuru ebe a, anyị ga-enye gị usoro ndụmọdụ ga-enyere gị aka ime ka nhọrọ ahụ dịkwuo mfe (cheta na ị nwekwara ike ịjụ anyị anyị ga-enyere gị aka),
Ihe mbụ ị kwesịrị ịkọwa banyere ya bụ na laptọọpụ ma ọ bụ 2-in-1 bụ nke nwere ike ịghọ mbadamba nkume, n'ihi ya, ha na-enwekarị ihuenyo mmetụ nke nwere ike itinye n'ọtụtụ akụkụ na ọnọdụ iji kwado iji kọmputa na ọnọdụ mmetụ aka.
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-akwado ka ịzụrụ ụdị kọmputa a naanị ma ọ bụrụ na ị ga-eji ya na mbadamba mbadamba ebe ọ bụ na ọ bụghị ya, ị ga-akwụ ụgwọ mgbakwunye maka njirimara nke ị na-agaghị eji. Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe gị ma ị na-atụle na 2 na 1 mode dị mkpa, buru ihe ndị a n'uche ndụmọdụ mgbe ị na-ahọrọ laptọọpụ na-agbanwe agbanwe:
Echiche anyị bụ nke ahụ ihuenyo bụ ihe kacha mkpa na ị kwesịrị ịtụle mgbe ịzụrụ laptọọpụ 2-in-1 dị ọnụ ala. Na ọ nwere mkpebi dị mma na akụkụ nlele dị mkpa, ịbụ ma ọ dịkarịa ala Full HD iji nwee ike ịnụ ụtọ ọdịnaya multimedia.
Ọ dịkwa mkpa ka ị ṅaa ntị na usoro nke hinges na-enye ohere ntụgharị nke ihuenyo (n'ọnọdụ ụfọdụ 360º). Anyị na-akwado usoro abụọ:
Ihuenyo mbughari nke anyị jikọtara keyboard na ya: nke a ga-abụ ihe gbasara Microsoft Surface. Na-enweghị akụkụ na-akpụ akpụ, ọ dịghị ihe nwere ike ịgbaji ka oge na-aga.
2 na-adabere: Ọ bụrụ na a ga-agbakwunye ihuenyo na mgbakọ keyboard nke laptọọpụ na-agbanwe agbanwe, ọ ga-abụrịrị site na iji 2 hinges. Ọ bụ usoro nke adịlarị karịa egosipụtara na ọ ga-adị ụkọ na "egwu" ma ọ bụ mkpọtụ na-apụta na oge na-aga.
Gbanahụ usoro mgbagwoju anya na nke ọgbara ọhụrụ, ha ga-enye gị nsogbu naanị n'ikpeazụ. Na mgbakwunye, ebe ọ bụ ihuenyo mmetụ, ị ga-eburu n'uche ihe ndị ọzọ a iji nweta ahụmịhe onye ọrụ kacha mma:
Oge nzaghachi: oge ​​na-agafe n'etiti oge anyị na-emetụ ihuenyo ahụ na mmeghachi omume gị kwesịrị ịnakwere. Oge nzaghachi ngwa ngwa nwere ike ịtụgharị ka nrụpụta dị ala. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ọ dị oke njọ, ọ nwere ike ịgbagwoju anya n'ihi na anyị nwere ike iche na ihuenyo ahụ emebeghị ka ịdebanye aha aka, nke nwere ike ime ka anyị nwee obi abụọ: "Emetụwo m ya?".
Ihuenyo ọtụtụ: mbụ ihuenyo mmetụ bụ resistive, ma ugbu a ndị kasị ebe nile bụ capacitive na multi-aka. Ihuenyo mmetụ dị iche iche na-enye anyị ohere ịdị na-arụpụtakwu ihe site n'inye anyị mmegharị ahụ, dị ka ịmalite menu, iji mkpịsị aka abụọ na-ebugharị ma ọ bụ ihe oyiyi na-atụgharị.
Stylus dakọtara: stylus bụ "pen" nke anyị nwere ike iji na-emekọrịta ihe na ihuenyo. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịme aka dị mfe, ebe ọ bụ na anyị niile nwere mkpịsị aka ndị ọzọ kpọmkwem, ma ọ bara uru ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ, dịka ọmụmaatụ, ise. Ọ bụrụ na nke a bụ ihe anyị chọrọ, ọ bara uru ịchọ ngwaọrụ nwere ihuenyo dakọtara na stylus na oge nzaghachi dị mma.
Na ngalaba a, anyị ga-amata ọdịiche dị n'etiti ikpe dị iche iche. Ọ bụrụ na ojiji ị ga-enye laptọọpụ na-agbanwe agbanwe bụ nke ụlọ, anyị na-akwado ka ọ bụrụ ìhè na kọmpat dị ka o kwere mee ka iji ya ghara ime ka ahụ erughị ala.
Ọ bụrụ na kama ị ga-eji ọkachamara eme ihe ma ọ bụ ị chọrọ a nwa akwụkwọ laptop Anyị na-akwado ịzụrụ laptọọpụ ndị na-agbanwe agbanwe nwere ihuenyo 14 ma ọ bụ 15 ka ị nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma, kuzie ihe ngosi ma ọ bụ akụkọ, wdg. Inwe ihuenyo mmesapụ aka ga-emekwa ka ị na-arụ ọrụ nke ọma
Ebe a ọ dabere ntakịrị na mmefu ego ị nwere. Echiche anyị na kọmpụta ndị nwere ike ịgbanwe agbanwe na-agwa anyị na a na-atụ aro ka anyị nweta ya 8GB nke RAM na draịvụ ike SSD iji mee ka nbudata ngwa ngwa ngwa ngwa, karịsịa na ọnọdụ aka iji mee ka ahụmahụ ahụ dịkwuo ụtọ.
Na ọkwa nhazi na eserese, ojiji nke a na-enyekarị ụdị ngwaọrụ a anaghị adịkarị mkpa ka anyị nwee ike ịzụta ihe dị n'etiti ma ọ bụ ọbụna dị ala na-enweghị nsogbu. SSD na RAM ga-arụ ọrụ dị egwu.
Ebe ịzụta kacha mma kọnvatịbụl laptọọpụ
Ihe ewu ewu nke ngwaahịa ndị a abawanyela nke ukwuu oge n'aga. Ya mere ọ dị nnọọ mfe ị nwere ike ịzụta laptọọpụ na-agbanwe agbanwe ụbọchị ndị a, ebe ọ bụ na ọtụtụ ụlọ ahịa nwere ụdị dị. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ụlọ ahịa kwesịrị ịtụle:
Amazon: Ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nwere nhọrọ kachasị ukwuu nke ụdị ndị a. Ụdị dị oke obosara, nwere ụdị ụdị, ụdị na ọnụ ahịa niile. Ya mere, ọ gaghị ekwe omume ịghara ịchọta nke dabara n'ihe anyị na-achọ na nke a. Na mgbakwunye, enwere onyinye na nkwalite n'ime afọ niile, ka anyị wee nweta ezigbo ego.
Mediamarkt: Agbụ nke ụlọ ahịa bụ nhọrọ ọzọ dị mma na nke a. Ha nwere ezigbo ngwaahịa dị na ụdị a, nwere ọtụtụ ụdị. Ha na-enwekarị ụdị nwere ọnụ ahịa dị oke mma, nke na-eme ka ha dabara na ụdị akpa ọ bụla. Ha na-enwekwa nkwalite mgbe niile, yabụ enwere mbelata.
Ụlọikpe Bekee: Ụlọ ahịa ndị ọzọ a ma ama nke ọma, nke nwere ezigbo nhọrọ nke ngwaahịa ngwá electronic. Anyị nwere ike ịzụta ụdị akwụkwọ ndetu na-agbanwe agbanwe n'ụdị ya, yabụ na ọ bụ ezigbo nhọrọ. Ha na-elekwasịkarị anya na ụdị adịchaghị mma, yana ọnụ ahịa dịtụ ọnụ karịa. Ọ bụ ezie na n'ime afọ niile enwere ọtụtụ nkwalite dị.
Carrefour: Agbụ hypermarket bụ nhọrọ dị mma, n'ihi na ha nwere ezigbo nhọrọ nke ụdị laptọọpụ na-agbanwe agbanwe. Ha na-enwekarị ntakịrị ihe niile n'ihe gbasara ọnụ ahịa, yana ụdị ndị nwere ike ịnweta. Ya mere, ọ bụ ụlọ ahịa na ọtụtụ ndị kwesịrị iburu n'uche, karịsịa ma ọ bụrụ na ha na-achọ ụdị nwere ọnụ ala dị ala.
Mbadamba ụrọ ma ọ bụ laptọọpụ na-agbanwe agbanwe? Uru na adịghị ike nke onye ọ bụla
Enwere ike inwe ọtụtụ ndị ọrụ nwere obi abụọ gbasara ihe ha ga-azụta, mbadamba ma ọ bụ laptọọpụ na-agbanwe agbanwe. Enwere ọtụtụ uru na ọghọm dị na ngwaahịa ọ bụla, nke kwesịrị iburu n'uche. Maka nke a, anyị ga-ekwu maka isiokwu ndị a n'okpuru:
Laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba ihe na-agbanwe agbanwe?
Ihe ndị a ga-atụle na laptọọpụ mgbanwe
Isi uru ọ na-ahapụ anyị bụ ntụgharị ya. Ọ bụ ngwaahịa anyị nwere ike iji n'ụdị ọnọdụ ọ bụla n'ụzọ dị mfe. Anyị nwere ike iji ya rụọ ọrụ, mụọ ihe, chọgharịa, dezie foto ma ọ bụ vidiyo na-enweghị nsogbu. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ya na ntụrụndụ, anyị nwere ike wepụ kiiboodu na otú a ga-enwe ike iji ya dị ka mbadamba n'ụzọ dị ntụsara ahụ anyị.
Uru ọzọ bụ na ha dị ike karịa mbadamba nkume. Ya mere, ọ bụrụ na anyị aghaghị ịrụ ọrụ ma ọ bụ na-amụ ihe, anyị agaghị enwe nsogbu. Anyị nwere ike iji ya dị ka laptọọpụ nkịtị n'echiche a, na-enwe ohere ịnweta ngwaọrụ niile dị n'ebe ahụ.
Otu n'ime nnukwu ọghọm dị na laptọọpụ a na-agbanwe agbanwe bụ ọnụ ahịa ya. Ọnụ ya dị ọnụ karịa nke mbadamba nkume. E wezụga ịdị oke ọnụ karịa ọtụtụ laptọọpụ. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ejedebe na-emetụta ahịa gị ma ọ bụghị ọtụtụ ndị ọrụ ga-enweta ya.
A ga-enyocha ya na mbadamba nkume
Mbadamba ụrọ ahụ nwere ntụsara ahụ nke iji ya na ọ dị mma maka ịchọgharị ma ọ bụ iri ọdịnaya dị ka isi uru. Enweghị ahụigodo mgbe niile na-eme ka ọ dị mfe ma dị mfe ibufe. Na mgbakwunye na inye ahụmahụ yiri nke ekwentị.
Ọzọkwa, mbadamba ụrọ dị ọnụ ala karịa laptọọpụ na-agbanwe agbanwe. Nke a bụkwa ihe a ghaghị iburu n'uche, ebe ọ bụ na ọnụahịa dị iche iche nwere ike ịpụta ama na nke a.
N'aka nke ọzọ, buru n'uche na ọ na-enye anyị nhọrọ ole na ole. Mbadamba ụrọ abụghị ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na anyị ga-arụ ọrụ, karịsịa ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-eji gam akporo ma ọ bụ iOS na ndị nwere Windows na-adịkarị ọnụ. Yabụ na n'echiche ahụ, ọ bụ oke maka ndị ọrụ.
Ọzọkwa, n'ihe banyere mbadamba nkume, n'adịghị ka laptọọpụ na-agbanwe agbanwe, anyị ga-azụta ahụigodo iche iche. Ya mere, anyị ga-achọta nke dabara na mbadamba nkume ma zụta ya. Ego mgbakwunye na nke a.
Uru nke ịzụrụ laptọọpụ 2-in-1 na-agbanwe agbanwe
Dị ike na ịrụ ọrụ nke ọma
Laptọọpụ 2-in-1 bụ kọmpụta gụnyere ngwaike emebere maka nke a. Ha nwere a ngwaike dị ike ma ọ bụ karịa nke ọtụtụ akwụkwọ ndetu, kamakwa nke emebere ka ọ rụọ ọrụ nke ọma na sistemụ arụmọrụ arụnyere na ndabara. Ihe a niile na-enye ha ohere ịbụ otu ndị na-arụ ọrụ nke ọma, na-enye ọtụtụ nhọrọ ma na-eri obere ume.
Kọmputa 2-na-1 bụ ma mbadamba nkume na kọmputa. Nke a na-enye anyị ohere iji ngwa mkpanaka anyị nwere ike iji mkpịsị aka anyị, nke gụnyere egwuregwu mkpanaka (ma ọ bụrụ na sistemụ arụmọrụ na-enye ya) na ngwa desktọpụ ga-enye anyị ohere ịrụ ụdị ọrụ ọ bụla. A kọwara n’ụzọ ọzọ, anyị ga-abụ ndị ga-ahọrọ ma à ga-eji mbadamba nkume ma ọ bụ kọmputa eme ihe, ha nile n’egbughị oge site n’otu kọmputa gaa n’ọzọ.
Ọdịdị mara mma karịa
Laptọọpụ adịla ogologo oge, mana laptọọpụ ndị na-agbanwe agbanwe bụ ngwaọrụ ndị tọrọ. Ụdị na-asọrịta mpi n'etiti ibe ha iji hụ onye na-ewepụta ngwaọrụ kachasị mma nke nwere ike ịdọta uche anyị, nke sụgharịrị n'ime ya n'ezie mara mma aghụghọ. Nke a na-edugakwa anyị n'isi ihe na-esonụ.
Ìhè na-eguzogide ọgwụ
Laptọọpụ 2-in-1 bụkwa mbadamba. Ọ bụrụ na ụdị na-elekwasị anya n'ịmepụta kọmputa dị arọ, na laptọọpụ bụ ngwá ọrụ anyị nwere ike itinye n'etiti ụkwụ anyị ma ọ bụ na tebụl, nkwa ha na-adị ọbụna karị mgbe ha mepụtara otu nwere ike ịghọ mbadamba nkume nke anyị na-eji aka abụọ. Nke a bụ ihe ha na-enweta, na 2-in-1 na-abụkarị Mkpa ọkụ ngwaọrụ karịa akwụkwọ ndetu. Nhazi ha agbakwunyere na-emekwa ka ha sie ike.
Sistemu arụ ọrụ zuru oke
Android na iOS bụ sistemụ arụmọrụ zuru oke maka mbadamba. Nsogbu bụ na, ọbụlagodi na Android, nke na-emeghe karịa, ha nwere ụfọdụ mgbochi. Enweghị ngwa desktọpụ, yabụ na ha anaghị enyere anyị aka ịrụ ọtụtụ ọrụ ọkachamara. Nke a bụ ihe na-adịghị eme na 2-in-1 akụrụngwa, ebe ọ bụ na ha gụnyere a sistemụ arụmọrụ zuru ezu, ọbụna zuru ezu karịa desktọpụ. N'ọnọdụ dị ka Windows, anyị ga-enwe sistemụ arụmọrụ desktọpụ nkịtị yana ọnọdụ mbadamba, yabụ anyị ga-enwe ihe niile n'otu ngwaọrụ ahụ.
Nchikota, echiche na ntule
Ndị a bụ ndị ultrabook laptọọpụ top convertibles ị nwere ike ịhụ na ụlọ ahịa na online ugbu a. Anyị ga-emelite ndepụta ahụ ka ị nweta ozi niile ịchọrọ n'otu ebe.
Ịkpebiri ihe nlereanya maka gị na kọmpụta 2-in-1 nwere ike ịdịtụ mgbagwoju anya ebe ọ bụ na onye ọrụ ọ bụla nwere mkpa dị iche iche, ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike tinye ya n'ụzọ zuru ezu na nkwupụta na, mberede, denye aha na akwụkwọ akụkọ anyị zitere gị ozi ma nyere gị aka ọbụna karịa.
N'okwu izugbe m nwere ike ịgwa gị na dịka ọmụmaatụ HP Specter X360 na-arụ ọrụ nke ọma maka ọtụtụ. Ọ bụrụ na ị nwere gburugburu 1000 euro iji nọrọ mgbe ahụ tụlee nke a Ibu Microsoft y ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya maka azụmahịa tụlee Lenovo ThinkPad ma ọ bụ Hp Elitebook.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Tipo » 2-na-1 laptọọpụ ndị na-agbanwe agbanwe
4 kwuru na "laptọọpụ na-agbanwe agbanwe 2-in-1"
Edere m gị akwụkwọ ụbọchị ole na ole gara aga ịrịọ maka enyemaka gbasara laptọọpụ. Ahụla m abụọ ndị a n'anụ ahụ na ụlọ ahịa ECI. N'aka nke ọzọ, ahụrụ m ụfọdụ na amazon.
M na-atụlekwa ohere nke Dell n'ihi na site na ihe m gụrụ na ọ nwere ezigbo ọrụ mgbe ọ na-ere ahịa, ihe na-abụghị nke Lenovo.
Achọrọ m enyemaka gị ma ị ga-agwa m ma ọ bụrụ maka gị nke ị ga-ahọrọ ma ọ bụrụ maka Dell ma ọ bụ MSI, ị ga-akọwapụta nke ị ga-achọ na amazon wee nweta ya, ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Achọghị m laptọọpụ nke na obere oge / ọkara na-adaba mkpụmkpụ. Abụghị m ọkachamara ya mere a na m arịọ gị ndụmọdụ
Ama m na asus karịrị 900 e. Ma ị na-eche banyere nke a, ma ọ bụrụ na ọ bara uru ịkwụ ụgwọ ahụ dị iche na ihe dị ukwuu maka otu nke àgwà ndị a
Ọktoba 2017-06 na elekere 14:9 nke ụtụtụ
Ndewo Maria, daalụ maka ịkwụsị ọzọ. Ị na-ahụ, anyị atụleworị ndị ị kwurula kemgbe ndị kasị ere ahịa na nke ọma ma ndị ọkachamara ndị ọzọ na ndị ọrụ anyị na-ewere ha dị ka ntụnyere anyị. Nke bụ eziokwu bụ na maka àgwà-ọnụahịa ha erubeghị "ruo na njedebe" ma ọ bụ n'ihi na ọ bụghị otú ahụ echekwa n'ihi na teknuzu àgwà ma ọ bụ n'ihi na ha enweghị ndị a. Enwere m ike ịkwado ndị anyị depụtara n'isiokwu a ma ọ bụ ezie na m ghọtara na Lenovo enweghị ezigbo ọrụ mgbe-ahịa (enwere echiche na ihe niile), eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị zụtala ezigbo 2-in-1. Laptọọpụ, ọrụ a anaghị abata n'echiche, a ga-eji ya mee ihe, n'agbanyeghị na aghọtara m na ọ dịbeghị anya. Site na ihe ị gwara m, m ga-emefu karịa maka Asus transformer karịa na njikọ onyinye nke m tinyeworo ya bụ ihe dịka € 700-800 na ọ bara uru, ma ọ bụ Suface. Nke a ma ọ bụrụ na ị doro anya na ị chọghị Lenovo n'ihi na ọ bakwara uru ma a bịa na mgbanwe mgbanwe 🙂
Ọktoba 2017-06 na elekere 29:7 nke abalị
Ndewo, ekele maka akụkọ a, m na-eche ịzụrụ laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba ihe na-agbanwe agbanwe mana enwere m obi abụọ. Ka anyị hụ ma ị nwere ike inyere m aka. Lenovo i tinyere masịrị m nke ukwuu mana ọ na-ekwu na ọ dịghị. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla yiri nke ahụ dị mma. Ahụla m na otu n'ime ihe kachasị mma bụ HUAWEI MediaPad T5, akara Huawei na-amasị m n'ezie, ị maara ma Huawei nwere laptọọpụ na-agbanwe agbanwe dị mma?
Ana m eche azịza gị nke ọma, daalụ.
Ọktoba 2017-06 na elekere 26:3 nke abalị
Obi abụọ adịghị ya, ihe nlereanya Huawei nke ị na-agwa anyị bụ nhọrọ dị ukwuu n'ụwa nke mbadamba nkume, mana na ọkwa nke laptọọpụ na-agbanwe agbanwe, eziokwu bụ na anyị nwere mmasị na ụdị ndị ọzọ dị ka Lenovo.